Manjaro 21.0.3 ikozvino inokutendera iwe kuti uise Linux 5.12 mune ayo ese edhisheni | Linux Vakapindwa muropa
Mangwanani ano, pandangovhura laptop yangu naManjaro, chiziviso chekuti paive nemagadzirirwo aifanira kuiswa chakasvetuka pandiri, ndakaenda kuPamac, ndakaona kuti paive nenhamba huru yemapakeji uye ini ndaitoziva kuti haisi nguva refu vasati vavhura tambo mumusangano kubva munharaunda kuti vazivise kuburitswa kweshanduro nyowani. Zvandakaisa mangwanani uye zvinogona kutotorwa kare ndizvo Manjaro 21.0.3, Ornara wechitatu akaruka kugadzirisa.
Pamwe kune vazhinji haisi iyo inonakidza kuburitswa pasirese, kana zvirinani ndinofunga zvichave zvakadaro kune vashandisi veGNOME edition. Uye ndezvekuti timu yevanogadzira ichi kugovera zvichibva paArch Linux inoda ita shuwa kuti zvese zvanaka usati waisa iyo GNOME shell 40 kune ako marekodhi. Panguva ino isu tichaenderera mberi ne combo desktop 3.38 + application 40, ndokuti, GNOME 3.38 muShell neGNOME 40 maapp.
Pfungwa dzeManjaro 21.0.3
Ivo havataure nezvazvo mukati shinda yake, asi yatovepo Linux 5.12 kubva kuna Manjaro maneja.
Kugadziridzwa kweGNOME Shell, senge iyo inogona kutakura akawanda monitors ane akasiyana siyana zororo mareti kana iyo skrini kurekodha yakagadziridzwa nekutora mukana wePipeWire uye iyo kernel APIs yekudzikisa zviwanikwa kushandiswa uye kugadzirisa mhinduro.
Iyo KDE edition yakagamuchira KDE Gear 21.04, ndiko kuti, Kubvumbi kunyorera kweprojekiti.
Kunatsiridzwa kweiyo Calamares simaki, senge iyo inogona ikozvino kufungidzira mitauro zvichienderana nenzvimbo kana GeoIP inogoneswa.
Iyo grub theme yadzoreredzwa.
Mifananidzo yeManjaro 21.0.3 inogona kutorwa pasi kubva Iyi link, uye ino inguva yakanaka yekurangarira kuti edhisheni edhisheni iri muXfce, KDE, uye GNOME. Vashandisi varipo vane vese nhau dzinowanikwa kubva masikati muSpanish peninsular nguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Manjaro 21.0.3 ikozvino inoita kuti iwe uise Linux 5.12 mune ayo ese edhisheni uye KDE Gear 21.04 inouya ku KDE